दायित्वको वार्षिकोत्सवमा श्रष्टा सम्मान - Naya Patrika
दायित्वको वार्षिकोत्सवमा श्रष्टा सम्मान
दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानले आफ्नो १९औँ वार्षिकोत्सवमा विभिन्न साहित्यकारलाई सम्मान गरेको छ । वाङ्मय शताब्दीपुरुष डा. सत्यमोहन जोशीले प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय र देवीप्रसाद वनवासीलाई ‘दायित्व वाङ्मय विशिष्ट सम्मान’ तथा रामबहादुर पहाडी र कलाधर काफ्लेलाई ‘दायित्व वाङ्मय सम्मान’बाट सम्मानित गरे । कार्यक्रममा कवि कृष्ण प्रधान १० हजार राशिको हरिकला–गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए ।
सोही अवसरमा रामप्रसाद पन्तद्वारा रचित कृति ‘पोटोम्याक किनारबाट’ र ‘रातको जून’ विमोचन गरियो । कार्यक्रममा दायित्वको १११औँ अंक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पोटोम्याक किनारबाट कृतिमाथि प्रा.डा. भागवत ढकाल र रातको जून कृतिमाथि श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले समीक्षात्मक मन्तव्य दिए । रामप्रसाद पन्तमाथि केन्द्रित भएर बिके पाल्पालीद्वारा लेखिएको ‘साहित्य मल्लिका’ पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
शताब्दीपुरुष जोशीले राष्ट्रका विशिष्ट स्रष्टालाई सम्मान गरेर प्रतिष्ठान स्वतः सम्मानित भएको बताए । दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका सचिव केशवराज पन्तले आफ्ना मातापिता र दिवंगत पत्नीको सम्झनामा एक लाख ६१ हजार एक सय ११ रुपैयाँ राशिको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।